ရှေးမြန်မာ..: November 2009
Posted by ရှေးမြန်မာ at 11/28/2009 1 comment: Links to this post
မြန်မာ ဒင်္ဂါးတွေအကြောင်း လေ့လာနေတာကြာပါပြီ။ ပြည်တွင်း ပြည်ပ ကျမ်းကိုး စာအုပ်၊ စာတမ်း များများစားစားမရှိပါ။ ခုနောက်ဆုံး အင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင့်ထွက် သန်းထွန်း (ဒေးဒရဲ ) ပြုစုတဲ့ Auspicious Symbols and Ancient Coins of Myanmar စာအုပ်ကိုတော့ မဖတ်ရသေးပါ။ ရခိုင်သမိုင်း ပညာရှင်တွေရေးသားပြုစုထားတဲ့ ရခိုင် ဒင်္ဂါး စာအုပ်တွေကို ရှာရတာ ပိုပြီးခက်ခဲတယ် ။
မြန်မာ ဒင်္ဂါးတွေအကြောင်း ဆာ အာသာ ဖယ်ရာ ( Sir Authur P. Phayre ) ရေးတဲ့ COINS OF ARAKAN, OF PEGU, AND OF BURMA စာအုပ်TRUBNER & CO., 57 AND 59, LUDGATE, LONDON စာအုပ်တိုက်ကနေ ၁၈၈၂ ခုနှစ်မှာ ထုတ်ဝေခဲ့တယ်။ အဲဒိစာအုပ် လန်ဒန် မှာစတင်ထုတ်ဝေတဲ့ အချိန်ဟာ အထက်မြန်မာပြည်မှာ မြန်မာဘုရင် သီပေါမင်း အုပ်ချူပ်နေဆဲ အချိန် ဖြစ်တယ်။
ထုတ်ဝေခဲ့တာ နှစ်ပေါင်းရာကျော်ကြာနေပြီဖြစ်သော်လည်းဘဲ သူကိုယ်တိုင် တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ဖယ်ရာပြတိုက်မှာ စုစောင်းထားတဲ့ ဒင်္ဂါးတွေကို အခြေခံပြီးရေးတာဖြစ်တဲ့ အတွက် အခိုင်မာဆုံး သက်သေခံစာအုပ်ဖြစ်သလို ဖယ်ရာရဲ့စာအုပ်ဟာ မြန်မာ ဒင်္ဂါးတွေအကြောင်း ကမ္ဘာကသိအောင် ချပြတဲ့ ပထမဆုံးစာအုပ်ဖြစ်မယ်။
မြန်မာ ဒင်္ဂါးတွေလို့ ဆိုရာမှာ ပျူဒင်္ဂါး ၊ ရခိုင် ဒင်္ဂါး ၊ မွန် ဒင်္ဂါး တွေကို လူသိများတယ်။ သို့သော် တနင်္သာရီ ဒင်္ဂါးလို့လူသိများတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်း ကမ်းရိုးတန်း ဒေသသုံးဒင်္ဂါး တွေကိုတော့ဖြင့် လူသိနည်းနေပါသေးတယ်။
ဘုရင့်နောင် ( ၁၅၅၁ - ၁၅၈၁ ) လက်ထက် မှာလည်းဘဲ ဒင်္ဂါးတွေ သုံးခဲ့သေးတယ်လို့ သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေရှိတယ်။ အဲဒိ ဒင်္ဂါးတွေကို လည်းပုံနှင့်တကွ ဒီလို ပုံရယ်လို့ ရဲရဲပြောဖို့ရာလိုသေးတယ်။ ဗဒုံမင်း လက်ထက် (၁၇၈၂-၁၈၁၉) မှာ ဒင်္ဂါး အသုံးပြုခဲ့သေးတယ်လို့ သမိုင်းပညာရှင်တွေရေးထားတာ ဖတ်ရတယ်။ ဘယ်လိုပုံစံရယ်လို့ အတိကျ ပုံပြပြီးပြောဖို့ လိုသေးတယ်။
ကုန်းဘောင်နောက်ဆုံး မင်းတုန်းမင်း နှင့် သီပေါမင်း ခေတ်တွေမှာ ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ဒေါင်း ဒင်္ဂါးဆိုလူတိုင်း သိကြ ၊ မြင်ဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။
ဒေါင်းတံဆိပ်အပြင် တခြား အသုံးပြုတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တွေကတော့
၄။ တိုး တို့ဖြစ်တယ်။
၅။ ခဲ စတာဖြစ်ပြီး တန်ဖိုးတွေကတော့ ( တကျပ် ၊ ငါးမူး ၊ တမတ် ၊ တမူး ၊ တပဲ )တို့ဖြစ်တယ်။
မြန်မာသမိုင်းပညာရှင် မကြန် ( ဒေါ်ကြန် ) ရဲ့ ရတနာပုံ ဒေါင်းဒင်္ဂါး စာတမ်းကို အောက်မှာပေးထားတဲ့ လင့်မှာသွားဖတ်နိုင်ပါတယ်။
Posted by ရှေးမြန်မာ at 11/28/2009 No comments: Links to this post
Posted by ရှေးမြန်မာ at 11/22/2009 No comments: Links to this post
မြန်မာသမိုင်းပညာရှင် ၊ သုတေသနပညာရှင် အများစုမှာ အားနည်းချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ တွေ့ရှိထားတဲ့ အချက်လက်တွေကို ဖော်ပြရာမှာ ပုံ တွေကိုစနစ်တကျ ဖော်ပြမှုအားနည်းတာပါ။ စာတမ်းကနေ စာအုပ်ဖြစ်လာသော်လည်းဘဲ ဘာကြောင့်မှန်းမသိ ဓာတ်ပုံ ဖော်ပြမှုအားနည်းနေတုန်းပါ။
အခုဖော်ပြထားတဲ့ စာတမ်းက ချားလော့ ကန်ဒြစ် ဂါလိုဝေး ( Charlotte Kendrick Galloway ) ပြုစုထားတဲ့ စာတမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာဘွဲ့ ( Ph D ) အတွက် ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ Australia National University ကိုတင်သွင်းတဲ့ စာတမ်းဖြစ်ပါတယ်။ " Burmese Buddhist Imagery of the Early Bagan Period ( 1044-1113 ) လို့ဆိုထားပေမယ့် အခြားဘာသာတွေဖြစ်တဲ့ ဗြဟ္မာဏ ၊ ဟိန္ဒူ ဝါဒဆိုင်ရာ အထောက်ထားတွေ့ရှိချက်တွေကိုပါ စီစစ်တင်ပြသွားပါတယ်။ ပုဂံ ဆိုသော်လည်းဘဲ သထုံမှာရှိတဲ့ မွန်လက်ရာတွေကို လက်လှမ်းမှီရာ စုစည်းဖော်ပြထားပါတယ်။
စာတမ်းလုပ်နေတဲ့ ကျောင်းသားများ၊ ပညာရှင်များ အတွက် အများကြီး အထောက်ကူဖြစ်မှာပါ။
စာတမ်းအကျဉ်းချုပ်နှင့် ဒေါင်းလုပ် လုပ်ယူဖို့ လင့် တွေကို အောက်မှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Title Burmese Buddhist Imagery of the Early Bagan Period (1044-1113)
Author Galloway, Charlotte Kendrick
Institution The Australian National University
Abstract Buddhism is an integral part of Burmese culture. While Buddhism has been practiced in Burma for around 1500 years and evidence of the religion is found throughout the country, nothing surpasses the concentration of Buddhist monuments found at Bagan. Bagan represents not only the beginnings ofaunified Burmese country, but also symbolises Burmese 'ownership' of Theravada Buddhism. ¶ While there is an abundance of artistic material throughout Burma, the study of Burmese Buddhist art by western scholars remains in it infancy due to historical events. In recent years, opportunities for further research have increased, and Bagan, as the region of Buddhism's principal flowering in Burma, is the starting point for the study of Burmese Buddhist art. To date, there has been no systematic review of the stylistic or iconographic characteristics of the Buddhist images of this period. This thesis proposes, for the first time,achronological framework for sculptural depictions of the Buddha, and identifies the characteristics of Buddha images for each identified phase. The framework and features identified should provideavaluable resource for the dating of future discoveries of Buddhist sculpture at Bagan. ¶ As epigraphic material from this period is very scant, the reconstruction of Bagan's history has relied heavily to this point in time on non-contemporaneous accounts from Burma, and foreign chronicles. The usefulness of Bagan's visual material in broadening our understanding of the early Bagan period has been largely overlooked. This is addressed by relating the identified stylistic trends with purported historical events and it is demonstrated that, in the absence of other contemporaneous material, visual imagery isavalid and valuable resource for both supporting and refuting historical events. ¶ Buddhist imagery of Bagan widely regarded to represent the beginnings of 'pure' Theravada practice that King Anawrahta, the first Burman ruler, actively encouraged. This simplistic view has limited the potential of the imagery to provideagreater understanding of Buddhist practice at Bagan, and subsequently, the cross-cultural interactions that may have been occurring. In this light the narrative sculptural imagery of the period is interrogated against the principal Mahayana and Theravada texts relating to the life of Gotama Buddha. This review, along with the discussion regarding potential agencies for stylistic change, reveals that during the early Bagan period, Buddhism was an eclectic mix of both Theravada and Mahayana, which integrated with pre-existing spiritual traditions. Towards the end of the early Bagan period, trends were emerging which would lead toadistinctly Burmese form of Buddhist practice and visual expression.
Thesis 01front.pdf 31.7 Kb
02Volume1_Text.pdf 1842.8 Kb
03Volume2_ToFig127.pdf 3935.3 Kb
04Volume2_Figs128-238.pdf 3765.9 Kb
Posted by ရှေးမြန်မာ at 11/08/2009 No comments: Links to this post
ခရုသင်း နှင့် သီရိဝစ္ဆ (အိမ်မွန်) ပုံပါ ရွှေဒင်္ဂါး။ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျို ( Japan, Tokyo ) အခြေစိုက် ပညာရှင်တစ်ဦးထံမှ ရရှိပါတယ်။
Posted by ရှေးမြန်မာ at 11/05/2009 No comments: Links to this post